MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA SCOTCH COLLIE DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Scotch Collie Dog
Cody Farm Collie
Scotch Collie waxaa loo kariyaa in badan oo ka mid ah awoodiisa shaqo marka loo eego muuqaalkeeda.
Scotch Collies waa ujeedo badan. Waxaa jira hal xarriiq oo loo xaglinayo nooca 'Squirrel Dog', in kasta oo ay wali leedahay muuqaal dhaqameed iyo dabeecad Scotch Collie ah. Inta badan kooxaha loo yaqaan 'Scotch Collies' waxaa loo isticmaali karaa sida eeyaha ugaarsiga ah hase yeeshe diiradooda koowaad waa sida eey dhaqda, oo maalmahan qaar baa loo ilaaliyaa sidii xayawaan gurijoog ah. Way ku fiican yihiin carruurta. Scotch Collies guud ahaan waxay la jaanqaadaan eeyaha kale waxayna badanaa ku fiican yihiin xayawaanka aan xayawaanka ahayn. Waxay kuxirantahay eyga shaqsiyeed iyo aadanaha ku hareeraysan, waxay saaxiibtinimo u leeyihiin kaydinta iyo / ama ka fogaanshaha shisheeyaha. Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye Khadadka si cad ayaa loo qeexay . Adiga iyo aadanaha oo dhan waa inaad ka sareysaan eeyga si aad ugu guuleysataan xiriir bani aadam / eey.
Dhererka: Ragga 21 - 24 inji (53 - 61 cm) Dumarka 19 - 22 inji (48 - 56 cm)
Miisaanka: Ragga 45 - 70 rodol (21 - 32 kg) Dumarka 40 - 60 rodol (18 - 27 kg)
Collie waa nooc caafimaad oo aad u yar oo ka cabanaya dhibaatooyin caafimaad oo aad u yar. HD maaha walaac la ogaan karo.
garka japanese iyo yorkie
Scotch Collies si guul leh ayey ugu noolaayeen guryaha, in kastoo ay u baahan yihiin jimicsi maalinle ah. Looma baahna in la quudiyo Scotch Collie maadaama ay dhif tahay wax halaagga oo ay ku raaxeysato meertada guriga / barxadda. Kenneling sidoo kale laguma soo jeedin, inaad moosato orod ballaaran mooyee. Scotch Collie wuxuu si cajiib ah uga shaqeeyaa beeraha wuxuuna ku raaxeeyaa inuu haysto qol uu ku wareego.
Scotch Collie wuxuu ubaahan yahay jimicsi fara badan, oo ay kujirto maalinle socod ama orod. Uma dhowa inay u firfircoon yihiin sida Xuduudaha Collies, laakiin ma aha baradho sariirtiis MA fiicnaanayaan uun marinka dayrka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan ciyaar Frisbee ah oo ku taal baarkinka, iwm. Haddii ay helaan socodkooda maalinlaha ah ama orodka, ma noqon doonaan kuwa sarreysa oo badiyaa waxay ku qanacsan yihiin inay guriga ilaaliyaan intaad maqan tahay.
Waxay kuxirantahay eeyaha iyo khadadkooda, laakiin 12-16 sano waa celcelis.
Koodhka waa in la cadayaa mid kasta illaa laba toddobaad. Haddii jaakadu leedahay derin weyn, sariirta waxaa laga yaabaa inay u baahato in la jaro, iyadoo ka soo horjeedda in la shanleeyo, si looga fogaado xanuunka eeyga. Maydh ama shaambo qalalan hadba sida loogu baahdo.
'Random' waa badbaadin Old Scotch Farm Collie ah. Wuxuu jiraa 10 sano iyo 70 rodol sawirkaan. Wuu hadlayaa oo calaamadaynayaa inuu waxyaalaha i tuso markasta. Waa cajiib !!
Nasiib u yeelo eeyga badbaadinta ee Old Scotch Farm Collie isagoo 7 sano jir ah miisaankiisuna yahay 70 rodol
Nasiib u yeelo eeyga badbaadinta ee Old Scotch Farm Collie isagoo 7 sano jir ah kuna shaqeynaya xirfadihiisa dhaqashada.
Brenda, oo ah gabar jir ah oo loo yaqaan 'Scotch Collie' oo ka soo jeeda Pacific NW, halkaas oo Scotch Collie badanaa loogu yeero 'Farm Collie'
Cookie, qof weyn oo Scotch Collie ah— 'Iyadu waa caqli badan, si kalgacal leh u feejigan oo aad u jimicsi badan. Lahaanshaha sawirka DreamDancer Collies
Cookie, oo ah qof weyn oo u dhashay Scotch Collie, waxaa iska leh aaladda sawirka 'DreamDancer Collies'
Mokie, oo ah nin dhalinyaro ah oo u dhashay Scotch Collie, sawirna waxaa iska leh DreamDancer Collies
Caddaaladda sida eey-wuxuu ku nool yahay beer, isagoo samaynaya waxa beerta weyn ee Collie jecel yahay inuu sameeyo. Lahaanshaha sawirka DreamDancer Collies
Tyson, oo ah nin u dhashay Scotch Collie oo ah eey, waxaa iska leh sawir DreamDancer Collies
Eeg tusaalooyin badan oo ah Scotch Collie
Sawirada Scotch Collie 1
Sawirada Scotch Collie 2
Scotch Collie Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
buluug buluug buluug iyo cadaan ah
silsilad ey ku xiraya banaanka
intee buu weynaan karaa bulldog